Asa soratra :: Namoaka boky angano i Masoandrontsoa • AoRaha
Asa soratra Namoaka boky angano i Masoandrontsoa
Mihoatra an’ireo sakana amin’ ny famoaham-boky eto amintsika ny mpanoratra sasany. Isan’ ireo tanora tsy mikely aina amin’ny fanovozana sy fampahafantarana hatrany ny asa sorany Ranaivoarisoa Rojontsoa Tsihoarana na i Masoandrontsoa, izay vao namoaka ny boky angano « La main de l’océan Indien ». Sady mpanoratra no mpilalao tantara an’onjampeo ny tovovavy.
Voarakitra ao anaty take- laka efapolo ny boky. Vao hain- gana no nanontana azy tany Frantsa, ary nandritra an’izao fihibohana izao. Io no sanganasany faharoa taorian’ilay tantara foronina amin’ ny teny malagasy ranoiray mitondra ny lohateny hoe « Ampelahasinoro ».
“Natao tamin’ny teny frantsay ny boky satria io no teny iraisana sy ifankahazoana voalohany amin’ireo nosy aty amin’ny ranomasimbe Indiana. Maneho ny hakanton’ireo nosy ao aminy ny boky. Andriamatoa Fodilahy mena (Foudi rouge na Foudia madagascariensis) no hitondra ny mpamaky hitety azy ireo ao anatin’ny La main de l’océan Indien”, hoy i Masoandrontsoa, raha manazava ny momba ny boky.
Hay sy kolo teny :: Hankalazaina amin’ny fomba hafa ny « Herinandron’ny kabary »
Lalaon-tsaina Échecs :: Mikendry fandresena iraisampirenena Rakotomaharo Fy